Top 8 Best Mobile Ngwa maka Cryptoсurrency - Blockchain News
Ọ bụrụ na ị itinye a ọtụtụ oge na-erekwa na kaadị-ego, mgbe i nwere ike ime na-enweghị mobile ngwa. Anyị anakọtara asatọ nke kasị adaba na-ewu ewu ngwa, nke ga-abụ na gị ama.
Top 8 nke kacha mma Mobile Ngwa maka Cryptoсurrency
Ebe i nwere ike na-niile ihe ọmụma banyere N'ezie mgbanwe na-akpata ego site etinye na ekwe ego. Ọ bụ iji tinye ha na ndepụta na ị ga-enwe ike soro fluctuations na N'ezie nke karịa 2,000 mkpụrụ ego. Ọ na-akwado niile kasị ewu ewu mgbanwe mgbanwe, tinyere Coinbase, Bittrex, Bithumb, Poloniex, Binance, Coinone na Bitfinex.
The ngwa na-arụ ọrụ gam akporo na iOC
Bitcoin Checker na-enyere monitor mgbanwe ego udu. Nakọtara ozi si karịa 80 mgbanwe. Na ngwa, ị nwere ike ịtọ nkeji oge site na Ịma Ọkwa banyere emelitere ahịa ga-natara. Na mgbakwunye, ị nwere ike hazi ụda Ịma Ọkwa.
The ngwa na-arụ ọrụ na gam akporo
Earn.com – a nkwusioru na nke i nwere ike irite bitcoins maka aza ozi na ihe aga-eme. Ha nwere ike cashed site Bitcoin-akpa ma ọ bụ na Coinbase exchange. Ma, ọ bụ uru arịba ama na iji irite ebe a gbara ọkpụrụkpụ ego, mkpa ka i nwere ụfọdụ ibu na kaadị obodo na nwere ezigbo nghọta nke isiokwu nke kaadị ego. Azịza gị ga-karịsịa ekele ma ọ bụrụ na i nwere a na-ewu ewu Twitter akaụntụ.
The ngwa na-arụ ọrụ gam akporo na iOS
Nke a ngwa ga-agwa gị banyere outlets na ndị na-ere ngwaahịa na ọrụ maka bitcoins nọ n'ógbè gị. Gịnị bụ n'ime? Interactive map, emelitere ndepụta na outlets dị nso, ndepụta mmasị ụlọ ahịa na a mgbako maka bitcoin akakabarede.
BitBuds mingle bụ ụdị mmadụ netwọk maka cryptocurrency obodo. Ihe mgbaru ọsọ nke na mmepe bụ dịrị n'otu kaadị-enthusiasts gburugburu ụwa na ike a okwu n'elu ikpo okwu maka ha. Ya mere, ebe i nwere ike ime onwe-akụziri, ịjụ ajụjụ, enyere ndị ọzọ aka ịghọta kaadị-ego, atụle nsogbu na-eme ka ndị enyi ọhụrụ. Na ngwa, ị nwere ike bulite foto na vidiyo, ike chats, na-eduzi ozi na mgbanwe files.
The Gliph ngwa bụ ihe dị ka Avito maka kaadị ego nwe. Ọrụ nwere ike ịzụta ma na-ere ngwaahịa na ọrụ maka bitcoins site inwe mmekọrịta ozugbo na onye ọ bụla ọzọ. Inside Gliph e nwere ebe-ozi na ugwo usoro, na nke i nwere ike na-eduzi azụmahịa n'ime ngwa onwe ya.
Otu ngwa iji chebe gị na akaụntụ na a abụọ-akpata njirimara. Eleghị anya, nke a bụ ihe mbụ ga-ga na ọ bụrụ na gị obere akpa a na-kegide ha ekwentị. The ngwa site codes enweghị ejikọta na Internet, nwere ike na-akwado multiple rụọ akaụntụ na-akpaghị aka na-ahazi iji QR-koodu. Iji tinye ihe ndekọ iji QR Koodu, mkpa ka ị na-enye ngwa ohere ka igwefoto.
The CoinPaper ngwa na-egosi ọhụrụ price nke kaadị ego na ndabere nke ngwaọrụ dị ka akwụkwọ ahụaja. Mma bụ na ị ga-aba na mkpa na-emeghe pụrụ iche ngwa dị nnọọ ka ịlele ahịa nke kaadị ego. Ihe niile, malite na agba atụmatụ na oge ọnụ ọgụgụ, bụ n'ụzọ zuru ezu configurable. Ahịa na-emelite na minit ọ bụla site na CryptoCompare API.
TabTrader bụ a free ọnụ maka erekwa kaadị ego na-ewu ewu mgbanwe. N'etiti ha bụ ndị Bitstamp, HitBtc, Huobi, Kraken, Bitfinex, Coinbase, Bittrex na ndị ọzọ. Enye ohere nke trading nke dị iche iche na abụọ nke kaadị ego: Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ripple, Namecoin, apụta, Etherium. Tinyere ihe ndị ọzọ, ngwa nwere ozi ọma si na Reddit, Coindesk na Bitcoin Magazine.
MasterCard nchọpụta Kemịkalụ a ...
Previous Post:Blockchain News 18 January 2018
Next Post:Blockchain News 19 January 2018